Munguva yekucheka, ichi chidiki uye chega theme. Kushora kuva nevamwe, uchitsigira kutaura kwakananga, zvidiki, zvakaputsika, uye zvakasarudzika hunhu hwechizvarwa chino; kutapika ndiyo yavo yakapusa, inosetsa uye ine hushamwari nzira yekutaura, uye zvakare inoratidzira yekuzviratidza. Panguva imwecheteyo, kudzikisa kutamba uye kufarira kweiyo mamiriro kwave kuve kwakakosha dhizaini geni uye chiratidzo chechinhu chemabhizimusi emabhizimusi kukwezva chizvarwa chevechidiki.
Zvinoenderana neongororo uye fungidziro yekutengesa kwemaitiro mukutanga kweChirimo Mutambo wa2021, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza ndiko kutarisisa kwekugadzirwa kwemicheka yenguo dzakarukwa muchirimo nemuzhizha ra2021 kuChina Textile City. Iyo tembere uye zhizha T-shati yakarukwa machira zvigadzirwa zve2021 inosimbisa yakasikwa nyaradzo, mashandiro uye ecology. Kubva pamucheka weruvara, chimiro chemachira kusvika pakupedzisa, inozotungamira kuvandudza machira, ayo anozoitawo t-shirt yechirimo neyechirimo machira eChina Textile City muna 2021 Mavara akakurumbira ave akasiyana siyana. Achibvisa zvinyorwa zvakasvibirira zvichibva pamakomo emakomo muzvikwiriso zvegzag uye mapatani emicheka pazvipfeko zvakarukwa, mugadziri anokanda ziso rake mhiri kwenzvimbo iri kure uye mudenga rakakura rakafukidzwa mugwenga. Invented a childish print pattern yemwedzi nenyeredzi, uye zvakare akapfupisa zuva rekuvira kwezuva, akarisimbisa kuita rakashinga tie-dhayi pateni. Mimwe misoro inosanganisira zvimiro zvinotarisa pakuvira kwezuva uye nedenga rine nyeredzi, zvinomiririra mugadziri iye, kusimbisa uye kushongedza netambo. Pasi pekupenga pamusoro peaya machira emachira anovanza dhizaini yakasarudzika yekugadzira mazano. Kana iwe ukanyatsocherechedza zvakakwana, iwe uchaona kuti kune akawanda akadzikama, akaderera-kiyi, anopfeka chaizvo zvinhu zvakavanzwa mune zvese zvakateedzana. Semuenzaniso, yemhando yepamusoro knitwear inotaridzika chaizvo. Yakakomberedzwa-yakasanganiswa micheka yakadai siriki yekotoni shinda, donje yerineni shinda, yakakwira-kuverenga chikamu kudhaya, maruva grey shinda, yakashata yakakwira-kuverenga mercerized donje machira, ane mavara jacquard uye intarsia machira, yakarukwa yakaturika tambo, matatu-mativi-akadhindwa machira Kumirira nyasha.
2021 China Textile Guta Chitubu / Zhizha T-shati kusarudzwa machira kunyanya kunosanganisira anotevera zvikamu: Mercerized donje ichiri chinhu chikuru chemabhizimusi ekumusoro-soro uye yekuzorora maT-shirts nekuda kwekugarika, kufema, kupfava, kuunyana-kuunyana, uye kubwinya kwakanyanya; zvigadzirwa zvakagadzirwa nekotoni zvinokonzerwa neSoft uye yakagadzikana, jira rejira rinokodzera ruzhinji rwevanhu, rinonyanya kukodzera vechidiki zvigadzirwa zvemhando yepamusoro; iyo semi-jersey donje jira rinodzokera kune iro rekutanga vara rekotoni kanivhasi, ichiumba yakasarudzika mativi-maviri kutambanudza, pamwe nekotoni yemishenjere kuruka uye yakaona diki mbabvu. Iko kuumbwa kweisina kuremerwa donje nemicheka yerineni uye zvisingatarisirwi zvisina kureruka zvakapfava dzakarukwa machira Cotton polyester zvigadzirwa zvave sarudzo yekutanga yemitambo nemitambo yekuzorora nekuda kwemaitiro avo anoshanda senge hunyoro hwekumwa uye ziya, anti-ultraviolet mwaranzi, uye antibacterial zvivakwa. Marara zvinhu zviri mukutsvaga kuchengetedza kwezvakatipoteredza nevatengi. Munzvimbo yakadzika-kabhoni, rave iro rinodikanwa rezvipfeko zvezvipfeko, uye mazhinji emitambo zvigadzirwa kumba nekune dzimwe nyika vatanga kuzadza zvinhu zvakadaro pamwero mukuru. Panguva imwecheteyo, zvinogona kuonwa kubva kuongororo kuti mugove wemicheka yakawanda yezvinhu mumusika weT-shati iri kuwedzera zvishoma nezvishoma nekuda kwekuenderana kwekuita kwavo. Semuenzaniso, machira esirika-donje haingori nemanzwiro ekotoni, asiwo ane chitarisiko chesilika. Iyo jira ine yakanakisa kuunyana kwemishonga uye iri nyore kutarisira, uye ine yakasimba musika yemakwikwi. Zvishoma-zvishoma zvinodzokororwa kushandiswa kwekuvaka modularity uye maindasitiri mapatani anoitwa akajeka akajeka kuruka machira ejezi machira uye maviri-mativi akapfekedzwa machira, pamwe neyakarerekera ruvara dhizaini. Iine saga-yakaita dhizaini, jira rakarukwa rine rakarukwa rakachekwa pamwe nemabhata erabha uye akadhirowewa mapatani anoratidza munzvimbo imomo.
T / C polyester-donje rakasanganiswa shinda 32S kuruka mavara, T / C polyester-donje rakasanganiswa shinda 32S kuruka machira eChina machira eguta 2021 chitubu uye zhizha dzakarukwa T-shati machira, uye makona mana ekotoni yakasanganiswa mutsvuku 32S kuruka kudhaya Pique, rakarukwa dhayadiki hexagonal pique, rakarukwa juzi, rakarukwa micheka-yakadhayiwa mitsetse uye rakarukwa 40S inotonhorera donje Ao Dai, donje katuni yakadhindwa Lycra tatamuka, rayon juzi, 40S donje juzi, 32S donje dhonza furemu, Wool kudhonza furemu, donje super yakapfava velvet, T / C polyester juzi juzi, T / C polyester donje rakasungwa juzi, CVC juzi, CVC slub juzi, yekristaro velvet kudhinda, super akapfava mukaka sirika, mukaka sirika chigayo Wool, donje piqué mesh jira, 30S rayon rakarukwa kristaro yerineni, 30S rayon yakarukwa juzi uye 21S, 30S, 32S, 40S, 45S donje rakarukwa dhonza furemu, rakarukwa donje Audrey, rakarukwa rayon dhayi jira, Yakarukwa rayon yakadhindwa machira, yakarukwa mukaka sirika sanding, yakarukwa mukaka sirika yakadhindwa, yakarukwa ice sirika yakadhindwa machira, yakarukwa ine mercerized donje, rakarukwa rayon mhepo kutenderera, dzakarukwa T / R polyester viscose juzi, 32S dzakarukwa Tencel donje jira jira, 40S dzakarukwa yakanaka shinda, dzakarukwa donje-mativi kudhirowa furemu brashi jira, rakarukwa cashmere yakapetwa-jira jira, T / T yakachena polyester shinda 32S dzakarukwa yarn-yakashongedzwa tambo yekotoni-senge yekudhira furemu, donje kuruka isina velvet, yakarukwa donje-senge velvet orenji tsvuku, hemp grey, Emerald girini, girini girini, gungwa bhuruu, denga rebhuruu, wepakati yero, beige, nyoro ndimu yero, ndimu green, pink, eggplant girini, yakajeka kofi uye mamwe mavara achawedzera odha. Mushure mevashandisi vakuru-vehunyanzvi hwekubatanidzwa kwepasirese kutengeserana kupasa kumisikidza kudhinda nekumisikidza embroidery, ichave inozivikanwa kwazvo. Yakasarudzika mameseji akavhenekera, senge akakwirira kuverenga shinda, shinda dzakakombama dzakashama, shinda dzisina kusimba, AB shinda, chikamu chakadhayiwa micheka, maruva grey yarns, pearl yarns, bamboo fibers, modal uye soybean mapuroteni tambo, cupro ammonia tambo, nezvimwe. vanogamuchirwa nemusika. Ichishandisa yepamusoro-mhando refu-yakakosha donje kutenderera, jira rakarukwa neyakaomeswa chimiro uye yakanaka kubwinya. Panguva imwecheteyo, machira akadhindwa anozofarirwa nemhando dzakawanda dzepasirese, kunyanya yakakwira-kuverenga shinda uye yakakwira-kuverenga micheka yejacquard yakarukwa nemhando yepamusoro-gauge yakatenderera michina yekuruka. Iyo rookie pakati pemicheka yepamusoro. Chikamu chakapetwa machira, kunyanya epamusoro-kuverenga chikamu akapenda machira, senge 120S / 2 uye 80S / 2 yarns, ane akasiyana mavara, uye avo akasarudzika maitiro mhedzisiro akaita akawanda mapatani dhizaini dhizaini. China Textile Guta 2021 Chitubu / Zhizha rakarukwa T-shati machira 32S yakachena polyester jira rakashongedzwa rakarukwa T-shati ina-nzira yakatambanuka uye 118D matte FDY, 100DDTY digital kudhinda rakarukwa T-shati ina-nzira yakatambanuka, kudhinda kwedhijitari uye post-yedhijitari sequin yakarukwa T Yakarukwa T-shirts ane mana-nzira kutambanudza, yakasaswa goridhe uye yesirivhu upfu uye bronzing zvakatambanudzwa pamativi ese, uye yakagadziridzwa maitiro anotora musika mukana. Kunyanya, 118DFDY rakarukwa rakadhindwa maviri-mativi anotambanudza T-shati machira uye 118DFDY yakarukwa yakadhindwa ina-mativi anotambanudza T-shati jira inozoverenga yakawanda yemusika wekugovana.